कपिलवस्तुमा आजबाट निषेधाज्ञा, के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ? « Mayadevi Online News Portal
कपिलवस्तुमा आजबाट निषेधाज्ञा, के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ?
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७८ मंगलवार ०६:०९
मायादेवी अनलाइन,चारनम्बर ।
कपिलवस्तुमा आजबाट निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । २ दिनअघि बसेको जिल्ला स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिको बैठकको निणर्य अनुसार गएराति देखि निशेधाज्ञा लागु भएको हो । अब निशेषधाज्ञामा अत्यावश्यक वस्तु र सेवा बाहेक अरु सबै ठप्प हुने छन् ।
अत्यावश्यक वस्तु किनमेलका लागि पनि बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म पसलहरु भने खुला रहने प्रशासनले जनाएको छ । निशेधाज्ञा उलंघन गर्ने जोसुकैलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कडा कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।
बाहिर हिँड्दा मास्क नलगाएको र नियम उलंघन गरी भीँडभाड गरेको, अत्यावशयक बाहेकका पसल र सेवा गर्नेमाथि प्रहरी निर्मम बन्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नवराज अधिकारीले मायादेवीलाई जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अब यी कुरा चल्ने छन् यी कुरा बन्द हुने छन् ।